DHEGEYSO-Khudbaddii munaasabadda 1-da Aug ee Madaxweyne Gaas. – Radio Daljir
Agoosto 1, 2016 11:04 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa caawa 1 August, 2016 Qasriga Madaxtooyada Puntland ee Garoowe kaga qayb galay Munaasabadda Xuska maalinta Taariikhiga ah ee 1-da August oo ku beegan 18-sanno guuradii kasoo wareegtey markii Puntland dhidibada loo taagey.
Munaasabadda ayaa waxa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Eng. Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, Marwada Madaxweynaha Dr’s Hodon Siciid Ciise, Wasiiro, Xildhibaano, xubno ka socda beesha caalamka, Abwaano, kooxaha kala duwan ee Fanka Puntland oo ay ka mid yihiin Mahuraan Band, Waaberi Puntland iyo Fannaaniin ka kala yimi waddamo kala duwan, kuwaas oo waqtigooda u soo huray sidii ay shacabka Puntland farxadda ula qaybsan lahaayeen.
Munaasabadda ayaa muddadii ay socotey waxaa lagu xusay guulihii ay dawladda Puntland ka gaartey sannadkaan 2016-ka dhinacyada siyaasadda, difaaca, dhismaha kaabayaasha dhaqaalah iyo tartamadii ugu dambeeyey ee Qur’aanka Kariimka ah iyo Kubbadda cagta oo labada ay Puntland ku guulaysatey.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xulka kubbadda cagta Puntland ee guulaha waaweyn usoo hooyey shacabka Puntland waxaa uu kumannaan qof hortood ku guddoonsiiyey abaal-marino isugu jira shahaado sharafyo iyo qaddarro lacago ah, taas oo uu Madaxweynuhu uga gol-lahaa in lagu dhiirri geliyo dhallinyaradaasi guulihii ay shacabkooda iyo dawladdooda usoo hooyeen.